Tamin’ny alalan’ny fanafody natambany tamin’ny « coca-cola » no nanatanterahany izany izay mbola hita teo amin’ilay toerana nahitana ny razana. Tst maty teo noho eo anefa ilay tovovavy raha ny fiheverana ny zava-nitranga ka nananton-tena izao mba hanaperany ny ainy. Fantatra moa fa nanana olana tamin’ny mpampiasan’ny vadiny ity tovovavy ity. Nangalatra entana tamin’ireo mpampiasam-badiny ireo mantsy izy mivady. Rehefa tratra anefa izy ireo dia nangataka fifanarahana tamin’ilay mpampiasam-badiny ny fianakavian’ilay tovovavy sy ilay vadiny. Na izany aza anefa dia tsy tana ny anaovavy ka naleony ihany nandao ny tany.